ဝမ်းချုပ်နေလို့ သက်သာသွားချင်ပါသလား - YOYARLAY Digital Media and News
ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို လူတော်တော်များများ ကြုံတွေ့ခံစားရတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ရပ်ပါပဲ။ ဝမ်းချုပ်ခြင်းက ဗိုက်အောင့်သလို၊ ဗိုက်နာသလိုလိုခံစားရပြီး အတော်လေးခံရခက်ပါတယ်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ မတည့်တဲ့တစ်ခုခုကို စားမိတာ (ဒါမှမဟုတ်) တစ်ခုခုကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် စားမိတာတွေကြောင့်လည်း ဝမ်းချုပ်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အစာအိမ်မှာ ဖိအားများလာတဲ့အခါ အစာခြေစနစ်ရဲ့ မတူတဲ့အပိုင်းတွေမှာ လေချုပ်သလိုလည်း ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ လေတက်တာ၊ လေပွတာတွေအပါအဝင် လက္ခဏာရပ်တွေလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီလို ဝမ်းချုပ်တာတွေဖြစ်လာခဲ့ရင် အရမ်းရိုးရှင်းတဲ့ အိမ်တွင်းနည်းတစ်မျိုးနဲ့ သက်သာအောင် ဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်။ အဲဒီဖြေရှင်းနည်းက အိမ်မှာတင်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ ဘာလဲဆိုတာကိုတော့ အောက်မှာ ဆက်ဖတ်ကြည့်ကြပေါ့နော်..။ ဝမ်းချုပ်တာကို သက်သာသွားအောင် ဖြေရှင်းပေးမှာက ဆားရည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆားရည်က လည်ချောင်းနာတာ၊ ပါးစပ်က ပိုးမွှားတွေကို ဖယ်ရှားပေးတဲ့နေရာမှာ အသုံးဝင်တယ်ဆိုတာ သိကြပြီးသားပါ။
အခုလည်း သင် ဝမ်းချုပ်သလိုခံစားရတဲ့အခါ ဆားရည်ဖန်ခွက်ကြီးကြီးတစ်ခွက်ကို သောက်သုံးတာက သင့်အစာခြေစနစ်ကို သန့်စင်ပေးဖို့၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း လက္ခဏာရပ်တွေကို သက်သာစေဖို့ လိုအပ်တဲ့ကုသနည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆားက ခန္ဓာကိုယ်ကို သဘာဝအလျောက် အဆိပ်အတောက်တွေ ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ ရေကလည်း ခန္ဓာကိုယ်ကို ရေဓာတ်ပြည့်ဝအောင် သူ့ဘာသာလုပ်ဆောင်ပေးပြီး အဆိပ်အတောက်တွေကို အဝေးကို တွန်းပို့ပေးပါတယ်။ ရေများများသောက်သုံးပေးရင်လည်း ဝမ်းချုပ်တာတွေမဖြစ်အောင် ကူညီပေးနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဆားရည်နဲ့သန့်စင်ပေးတာက အစာအိမ်မှာ အစာမရှိခင် မနက်ခင်းပိုင်းမှာ အရင်ဆုံးလုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင် အထိရောက်ဆုံးပါပဲ။ သင်က မနက်ခင်းမလုပ်ဘဲ နောက်မှာလုပ်မယ်ဆိုရင် နှစ်နာရီလောက် ဘာမှမစားဘဲနေပြီးမှ သောက်ပေးသင့်ပါတယ်။ ပြုလုပ်နည်းကတော့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပါပဲ။ ပုလင်းအကြီး (သို့) ခရားအကြီးထဲမှာ သန့်စင်ပြီးသားရေ (၁) လီတာ (ဆူတာမဖြစ်ရပါ၊ ဒါပေမဲ့ သင့်တင့်သလောက်တော့ အပူပေးထားပါ) ကို ထည့်လိုက်ပါ။ အဲဒီနောက် ဆား (စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ -၃ ဇွန်းလောက်) ရောထည့်ပြီး ဆားတွေအားလုံးပျော်ဝင်သွားတဲ့အထိ သမအောင်မွှေပေးပါ။
ဆားရည်အဆင့်သင့်ဖြစ်သွားတဲ့အခါ ဆားရည်များများယူပြီး ချက်ချင်းသောက်ကြည့်ပါ။ (၁၀) မိနစ်အတွင်းပြီးအောင် သောက်ပေးသင့်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာ အစာခြေစနစ်အတွင်း သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်သွားအောင် သင့်ဗိုက်နဲ့ ဝမ်းဗိုက်တို့ကိုလည်း ဖြည်းဖြည်းသာသာလေး နှိပ်နယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းက မိနစ် (၃၀) လောက်မှ စအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး သင့်ခန္ဓာကိုယ်က အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။
Ref: Suffering from constipation? Try this salt water cleanse!
Previous Previous post: အခွံနွှာပြီးစားခံလိုက်ရတဲ့ အနုပညာပြခန်းက အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၂၀,၀၀၀) တန် တိပ်ကပ်ငှက်ပျောသီး
Next Next post: ဖောက်သည်တစ်ဦး သွားရည်စာမုန့်တွေ အိမ်ရှေ့မှာထားပေးလို့ဖြစ်သွားတဲ့ ပစ္စည်းပို့သမားတစ်ဦးရဲ့ ပျော်ရွှင်မှု